Ihe Nroputa Anabolic Steroids Raws Ihe XDRX AASraw Steroids
Ihe na 07 / 18 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Dabere na ntọala azụmaahịa gara aga nke 4 afọ gara aga na ajụjụ dị iche iche, anyị chịkọtara 10 ihe kachasị ewu ewu anabolic steroids (AAS) maka labs ndị metụtara, ndị na-ere ahịa na ndị ahịa.
Anyị emechiela akụrụngwa atọ kachasị elu nke ụlọ ọrụ. Maka ndepụta zuru ezu, lelee elu 10 kachasị ewu ewu anabolic steroids akụrụngwa.
Nnukwu ọnụ ahịa AAS agbagoro ihe: Kachasị mma inweta ya na ego dị obere Insol AAS Raws material: Ihe omuma karie gbasara onu ahia azuma ahia nke AAS:
Testosterone Enathate / Testo E / Ule E ntụ
Rating:★★★★★ Trenbolone Acetate / Tren Ace / Tren A ntụ
Rating:★★★★★ Methandrostenolone / Dianabol ntụ ntụ
Nnukwu ahịa AAS akụrụngwa sitere n'aka anyị
Ngwakọta kachasị mfe na akụrụngwa AAS dị ọnụ ala
Trenbolone Acetate ntụ ntụ siri ike karịa Trenbolone Enanthate n'ihi Enanthate ester na-eburu ọtụtụ uka na ogige ahụ.
Imirikiti ndị ọrụ na-aga na Trenbolone hormone mgbe niile bụ Trenbolone Acetate raw ntụ ntụ.
Dinandrol nwere ike ịba uru nke ukwuu maka ịba ụlọ.
Mmetụta nke Dinandrol na-adị mfe ijigide ya ozugbo a kwụsịrị iji ya.
Lee Ihe 10 Anabolic Steroids akụrụngwa bụ akụrụngwa:
Testosterone Enathate raw ntụ ntụ - Kachasị N'ogbele Steroids agbara arụ ọrụ
Methandrostenolone ntụ ntụ - Kachasị N'ogologo Nrụ Anụ Steroid
Trenbolone Acetate raw ntụ ntụ -Bo Steroid sitena ike zuru oke
Oxandrolone raw ntụ ntụ - Otutu Ndi Nwanyi Kachasị Ekele na-a Oụ Egwu Steroid
Stanozolol raw ntụ ntụ - Ọtụtụ na-ewu ewu na -anụ mkpesa
Hormone mmadụ na - eto - Peptide kachasị ewu ewu
Nandrolone Decanoate ntụ ntụ - Ọtụtụ Oke steroid steepụ
Boldenone Unde mmiri nke mmiri mmiri - Ọtụtụ steroid ndị na-eme ogologo oge
Drostanolone Propionate raw ntụ ntụ - Ọtụtụ steroid Exotic Exotic
Methenolone Enanthate raw ntụ ntụ - Ọtụtụ na - akacha obere Side Side na - arụ ọrụ steroid
E nwere nkọwapụta ole na ole dị mkpa ịchọrọ maka mgbe ị na-ahọrọ Anabolic Steroid. Maka ụlọ labs, ọ dị mkpa ka etinyere ngwaahịa ndị a ma ama ka ọ bụrụ mbadamba ma ọ bụ capsules. Ngwunye a ga - abụ igwekota, igwe ọgwụ, ihe a na - ahụ maka ịwa ahụ, igwe mkpuchi, wdg. Ngwa ndị dị otú ahụ na-efu oke mana ọ ga - enyere aka iwulite ụdị gị ma nweta azụmahịa ogologo oge.
Steroid ogwu nri:
Stanozolol (Winstrol / winny) ntụ ntụ
Mesterolone (Pro ayika)
Ọtụtụ n'ime usoro Testosterone
Ọtụtụ n'ime usoro Boldenone
Mee N'onwe Gị na Homebrewer
Kersme nri n'ụlọ gị (Mee N'onwe Gị) dị mma ịmalite site na steepụ stewị dị mfe, na-enwe isi gbazee na mmanụ na -emekarị na mmanụ ụgbọelu. Enwere ike ịchọta steroid ndị a tụrụ aro ka dị n'okpuru:
Nandrolone phenylpropionate / NPP ntụ ntụ
Trenbolone Acetate raw ntụ ntụ
Boldenone Undecylenate / Equipoise raw mmiri mmiri
Drostanolone / Masteron Enanthate ntụ ntụ
Drostanolone / Masteron Propionate ntụ ntụ
Testosteorne Enanthate raw ntụ ntụ Methandrostenolone ntụ ntụ Trenbolone Acetate raw ntụ ntụ Oxandrolone raw ntụ ntụ Stanozolol raw ntụ ntụ Ọganihu Ụmụ Mmadụ Hormone Nandrolone Decanoate ntụ ntụ Boldenone Unde mmiri nke mmiri mmiri Drostanolone Propionate raw ntụ ntụ Methenolone Enanthate raw ntụ ntụ
1. Testosterone Enanthate raw ntụ ntụ
Testosterone Enanthate raw ntụ ntụ bụ testosterone dị ọcha nke nwere ogologo oge ogologo ọrụ ester jikọtara ọnụ ma bụrụ testosterone nke ewu ewu. Dị ka ụdị Propionate ọ bụ otu n'ime ụdị ndị a na-ahụkarị n'ụwa niile site na arụmọrụ na-eme ka ndị na-eme egwuregwu dị elu. Banyere oru Njirimara nke Testosterone Enanthate, a ga-enwetacha otu nsonaazụ otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na e jiri ya na usoro onyonyo nke Propionate.
2. Methandrostenolone ntụ ntụ
Methandrostenolone raw ntụ ntụ na-anọchi anya otu n'ime ndị kachasị ewu ewu na otu n'ime steroid anabolic kachasị mkpa n'oge niile. Enweghị ajụjụ, nke a bụ steroid a na-ahụkarị ọnụ na-adabara ahịa na otu n'ime steroid kachasị ewu ewu n'ụdị ọ bụla. Ọ bụ ezie na a na-ahụkarị ya dị ka mbadamba ihe eji ekwu okwu, enwere ike ịchọta Methandrostenolone raw ntụ ntụ ka ọ bụrụ ọgwụgwọ a na-egbu egbu, ma mbadamba nkume ndị ahụ na-anọchi anya ụzọ isi nchịkwa.
3. Trenbolone Acetate raw ntụ ntụ
Acetate ester bụ ụyọkọ mkpụkọ mkpirisi dị na finaplix mole. O nwere ndu ọrụ nke ụbọchị 2-3 mana idobe ọkwa ọbara nke trenbolone dị elu ma kwụsie ike, a na-atụkarị aro injelo kwa ụbọchị. Acetate ester na-enye nnabata homonụ ngwa ngwa na oke nke bara uru nye ndị na-achọ ngwa ngwa, ya na oge iwepụ ngwa ngwa acetate ester nwere ike kwụsị na mmalite nke mmetụta ọjọọ.
4. Oxandrolone raw ntụ ntụ
5. Stanozolol ntụ ntụ
Ọ bụ ezie na otu n'ime steroid anabolic mara nke ọma, Stanozolol raw powder bụ ihe a ma ama n'etiti ọtụtụ ndị na steroid site na iji ọnụ ọgụgụ mmadụ. Ọ bụ n'ọtụtụ ụzọ steroid anabolic dị nro ka nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ga-eji. Ọ dịkwa oke mkpa, ọ nwapụtala na ọ dị mma maka ọtụtụ nkwalite arụmọrụ.
6. Hormone mmadụ na-eto eto
7. Nandrolone Decanoate ntụ ntụ
Nandrolone Decanoate raw ntụ bụ otu n'ime steroid anabolic na-ejikarị n'etiti arụmọrụ na-eme ka ndị na-eme egwuregwu dị elu. A maara ya nke ọma maka ịbụ nnukwu steroid steepụ oge, mana ọ bụkwa ihe kachasị amasị n'ọtụtụ egwuregwu maka uru ọgwụgwọ ọgwụgwọ ya. N'ihi nnukwu ọgwụgwọ ọgwụgwọ ya, hormone Nandrolone bụ otu n'ime steroid anabolic bara uru na omume ahụike
8. Boldenone Unde mmiri nke mmiri mmiri
Boldenone Underenlenate raw fatịlaịza bụ testosterone ewepụtara anabolic androgenic steroid ma bụrụ nke na-agbanwe agbanwe nke testosterone. Ọ bụ obere mgbanwe na mgbakwunye abụọ agbakwunyere na carbon otu na ọnọdụ abụọ. Undecylenate ester na-enye ohere maka nnwepụta kachasị elu na Boldenone ihe dị ka ụbọchị 3-4 ụbọchị mgbe a gbasesịrị ya, yana iwepụta hormone ahụ na-aga n'ihu iji soro ihe dị ka ụbọchị 21.
9. Drostanolone Propionate raw ntụ ntụ
Ọtụtụ Masteron niile dị n'ahịa ga-abụ ntụ ntụ ntụ nke Drostanolone Propionate. Drostanolone Propionate raw ntụ ntụ bụ dihydrotestosterone (DHT) na-enweta steroid anabolic. Kpamkpam, Masteron bụ homonụ DHT nke etinyere n'ụzọ nhazi site na mgbakwunye nke otu methyl na carbon 2 ọnọdụ, Nke a na-echebe homonụ site na mmebi metabolic site na 3-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, nke a na-ahụ na akwara ọkpụkpụ. Ọ na - eme ka ọdịdị anabolic nke hormone ahụ dịkwuo ukwuu.
Otu n’ime ndị a ma ama n’etiti ndị ahụ na-asọ mpi ma ọ bụ na-achọ ụdị mma ga-achọ mma
10. Methenolone Enanthate raw ntụ ntụ
A na-atụle Methenolone Enanthate raw ntụ ntụ dị ka otu n'ime steroid anabolic na-adị nchebe na ahịa ma ọ na-eburu ọkwa nchekwa dị mma iji kwado ihe a. N’ezie, ejirila steroid a mee ihe nke ọma n’ịgwọ ụmụaka na-adịghị ndụ na ụmụ ndị ka bu n’afọ n’enweghị mmerụ ahụ. Edere ya ọgwụ maka osteoporosis na sarcopenia.
Genius AAS Raw bụ nke a ga-atụle tupu ịzụta
A bịa n'ihe ndị eji emepụta steroid, ọtụtụ ndị na-elebara mmepụta dị na China anya ozugbo. Ọ bụ ebe a ka a na-ebubata ngwa ahịa maka mmepụta nke anabolic na mba ndị ọzọ. Ihe akụrụngwa steroid maka China bụ ihe ewu ewu maka ọtụtụ ihe:
Ọ bụ na China ka ọ nwere oke mma.
Ndokwa na ụkpụrụ niile.
Ọnụnọ nke ikike maka mmepụta na ire.
A na-eji okike ihe eji eme ihe na uto, nke enwere ike iji ya mee ihe.
Isi okwu ikpeazụ maka ọtụtụ ndị na - emepụta steroid bụ ihe kachasị mkpa. Nke a bụ n'ihi na ọ kachasị mfe iji zụta ihe eji emepụta steroid maka China. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ etinye aka na ahịa ebe a, ọ dịghịkwa mkpa ịnyekwu akwụkwọ maka ịzụta ngwongwo. Nke a apụtaghị na na China ị nwere ike ịzụta akụrụngwa maka imepụta n'ụlọ. Ee e, enwere nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-eresị ndị ahịa naanị ngwaahịa. Maka izu zuru oke ikike maka imepụta ya na ọtụtụ asambodo dị mma.
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ chọrọ akwụkwọ ndị ọzọ, yabụ tupu ịzụta ntụ maka emeputa steroid, ọ ka mma ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ ma jụọ akwụkwọ ndị achọrọ maka ya. Naanị mgbe nke a gasị, a ga-azụta ngwa ahịa maka steroid site na China ma weta na obodo ebe amịpụtara ọgwụ anabolic na androgenic steroid.
Mana, maka ụlọ nyocha dị n'okpuru ala (ugl) ma ọ bụ nke gị, ọ gaghị ekwe gị omume ịnye ndenye ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ akwụkwọ nnabata ziri ezi maka ebumnuche azụmahịa dị otú ahụ, enwere isi mmalite dị n'ahịa ahụ iji kwekọọ ụdị mkpa a. Yabụ, tupu ịzụta akụrụngwa ịchọrọ, gbalịa ịchọta ihe ziri ezi na ọgụgụ isi, iji chebe onwe gị pụọ n'aka ndị adịgboroja.
1. Kedu otu esi achọpụta ngwaahịa dị mma tupu etinye iwu?
A: COA, HPLC, HNMR dị.
B: A ga-enye akwụkwọ nyocha maka ihe ngosi ndị ọzọ site n'oge ruo n'oge.
2. Kedu ka esi ekwe nkwa iji ego gị chekwaa?
Enwere ike ịkwụghachi ego ọ bụla maka ntụ ntụ ntụ tupu ezighara ngwongwo.
3.Can ị na-ekwe nkwa nnweta dị?
4. Kedu ka ịmalite iwu na ịkwụ ụgwọ ego?
Uru site na ihe Anabolic Steroids Raw
Ọ dịghị n'okpuru dosched gears si ụfọdụ n'okpuru ụlọ labs, mgbe ime biya ya maka onwe gị.
Efu na-agaghị akwụ ụgwọ maka okirikiri gị iji ụdị nke gị. Ọbụna onye nwere obere ego nwere ike nweta nrọ ahụ na-ewuli elu.
Ighagharia ahihia nke AAS ka o buru ọgaranya
Iwulite udi ihe gi na ibu ihe di n’ime okirikiri a
Ime nyocha banyere ojiji ma nyere ndị ọzọ aka.
DECA ntụ ntụ-Nduzi Ntuzi Olee otú Mee Nandrolone Decanoate (Durabolin)	MK-677 (Ibutamoren) na-arụ ọrụ nke ọma Maka Buildinglọ Arụ Ọrụ? Nyocha Sarm [2019 NEW]